Foosha Iyo Heerarkeeda |
Ilhaan Ciise Maxamed — December 8, 2018
Hooyada mas’uuliyad kama saarno in ey maareyso xaaladaha foosha laakiin waxaa qasab ah in ey wax ka ogtahay, xaaladda foosha iyo waxa eytahay cilmi ahaan. Foosha waxa ey uqeybsantaa labo qeybood, mid run ah oo ilmuhu kuyimaado iyo mid been ah oo xanuun ookaliya kuheysa hooyada:
Foosha Caadiga ah (Normal labour):
Waxa ey leedahay riixid isdaba joogta: Spontaneous expulsion.
Ilmuhu waxa uu soomaraa kanaalka dhalmada, laguma qalo: Through birth canal.
waqtiga ugubadan ee lafoosho waa 24saacadood: Within 24hrs.
Waa fool aan dhiblasocan oo sicaadi ah loodhalo: Without complication.
Foosha Runta Ah Maxaa Lagu Yaqaan?:
Waxaa lagu yaqaanaa xanuun caloosha hoose kabilaawda kuna fida ilaa dhabarka iyo mindhicirada.
Sidookale waxaa furma saxaaxa.
Yixda oo dilaacda.
Ilmaha oo hoos u soo daga, madaxa ilmaha oo ladareemo in uu soodagay.
F.G waa calaamadaha ugu muhiimsan ee lagu yaqaan foosha saxda ah.
Marxaladaha Foosha (Stage of labour):
Foosha waxaa looqeybiyaa seddex qeybood ama marxaladood, marxalad walibana waxa ey kaduwantahay marxaladaha kale.
1. Marxaladda koowaad -First stage-:
Waxa ey billaabataa:isla marki xanuunka runta ah uu bilaawdo.
waxa ey ku egtahay marxaladdaan marki uu minka furmo guud ahaan illaa 10cm, Ends:with full cervical dilation(10cm)..
Marxaladdaan waxa ey socon kartaa inta udhaxeysa 12-18saacadood.
2. Marxaladda labaad -Second stage of labour-:
Waa marxaladda uu ilmuhu kaga soobaxo caloosha hooyada kuna yimaado banaanka: marki uu furmo guud ahaan minka waxa kuxiga waa in uu ilmuhu dhashaa, sidaa owgeed marxaladdaan waa middii uu canuga kudhalanaayay.
Waxa ey billaabataa marka uu minka wada furmo.
Waxa ey ku egtahay marki uu canuga soowada baxo, ee uu banaanka yimaado.
Muddada ey socon karto waa 1-2saac.
3. Marxaladda Seddexaad (Third stage of labour):Marxaladdaan waa soo bixitaanka ibida, markii uu canuga dhasho waxa ku xiga ee lasugaayo ayaa ah in ibida laga soo saaro hooyada.
Waxa ey billaabataa marka uu canugga soowada baxo.
Waxa ey dhammaataa marki lasoo saaro ibida iyo wixi minka kujiray oo idil.
Waqtiga ey qaadaneyso marxaladdaan waa 10 – 30 daqiiiqo.
Waxaa ugu adag marxaladda koowaad oo ah tan ugu waqtiga dheer waa inta ey hooyadu foolaneyso, xilligaan culeesku waxa uu saaranyahay hooyada. Marxaladaha kale culeeskooda waxa uu saaranyahay waa xirfadlayaasha caafimaadka gaar ahaan umilasada.
Side Loola Tacaalaa Marxaladda Koowaad (Management of first stage of labour):
Xaaladdaan waxa ey bilaabataa marka saxaaxa(minka) si dhameystiran u furmo(full dilatation).
Hooyada waa in lageeyaa qolka umulisada, si degdeg ah ayay xaalad waliba ku dhali karta.
Waxaa qasab ah in ey xaadir ahaato umuliso xirfad wanaagsan iyo qibrad u leh ka umulinta hooyada, si ey u xaliso hadii ey yimaadaan dhiig bax, canuga oo kafka ku dhaga, tabardarri, booska oo ciriiri noqda iyo kuwo kale. Sidookale waxaa qasab ah umulisada in ey digtoonaato si ey uga hortakto isku furanka yimaada xiliga dhalmada.
Side Loola Tacaalaa Marxaladda Seddexaad (Management of third stage of labour):
Marxaladda seddexaad waxa ey ubbaahantahay digtooni iyo fiiro dheer, intabadan waa lafududeystaa waxaana kayimaada halis badan oo qatar galinkara nafta hooyada sida:
Haddii ibida siddagan loo soosaari waayo ama lahubsan waayo in ey soo wada baxday iyada oo idil waxaa ka imaan kara dhiig bax, kaas oo sababi kara in ey hooyadu udhimato.
Kumanaan hooyoooyin Soomaaliyeed ah ayaa udhinta sanad waliba dhiig baxa dhalmada kadib yimaada.
Waana wax aad ufudud in laxaliyo dhiig baxaas. Hadaba hooyo uyeelo aqoon dheeri ah oo waliba xeeldheer sida aad naftaada udaryeeli lahayd uurka intaad leedahay iyo kadib-ba.
Ibida waa wax aad ummooddo xinjiro meel la’isku keenay oo dabool looga dhigay xuubka caarada oo kale!! Ma’iga diidi kartaa xinjiro adag oo xuub caaro lagu daboolay in ey sifudud udillaaci karto marwaliba? Jawaabtu waa maya?. Marwaliba oo ibida lagasoosaaro hooyada waxaa qasab ah in lahubiyo xuubka ibidi oo sifiican loo fiiriyo, haddii uu dillaacsanyahay macnaheedu waa in cad looga soo dhax tagay minka.
F.G: marwaliba maskaxda ku haay inta minka uu ku dhax jiro cad yar ama xinjir yar maxirmaayo minka, sidookale inta uu minka furanyahay waxa aad maskaxda kuheysaa in uusan dhiig baxa joogsanayn, dhibaataduna sii badan karto. Sidaa awgeed waxa aan kulatalin lahaa umulisooyinka buuggaan aqrisanayaan in e kudadaalaan badbaadinta nafaha hooyooyinka Soomaaliyeed una sharxaan wax badan.
Jarriinka –Episiotomy: faa’iidada iyo khasaaraha
Jarriinka(Episiotom) waa Jarriin lagu jarayo hooyada perineum keeda (meesha u dhaxeysa dabada iyo ferjiga). Inta lagu gudajiro dhalmada. Sababata ayaa ah in laga cabsanaayo in xuubka hooyadu dillaaco marka ilmaha madaxiisu uu soo galo kafka. Umulisada inta eysan kujarin kahor waxa ey qiyaaseysaa in canugga uu soomarikaro meeshaan oo ey kufilantahay, haddii la’arko in canugga madaxiisa uu san soomari krin halkaan waxaa qassab nagu ah in aan jarno si ey meeshu waasac unoqoto, hooyada iyo canugeedana uusan dhib usoogaarin. Haddii ilmaha lagu soojiido biro waxaa aad uqatarbadan in uu dillaaco xuubkaas udhaxeeya dabada iyo farjiga. Cilmi baaris lasameeyay ayaa muujisay in ey qatar badan ka imaan karto marki la’isticmaalo biraha, isla markaasna ey hooyadu isku furmi karto.
Meeshi lajaray waxaa lagu sameeyaa tolliin si eysan dhiigbax ukeenin, tolliinku waxa uu kuxiranyahay illaa iyo meeshi lajaray hadii ey gudaha jirto waxaa loobaahanyahay in gudaha laga sootolo.
Next post Taariikh Nololeedkii Abwaan Qiiq oo Kooban 1973-2018
Previous post Muxuu Sargaalkaan Ku Dilay Xaaskiisa?